मङ्गल ग्रहः तीनवटा भूमिगत ताल पत्ता लागेको दाबी - Bhaktapur Radio
गृहपृष्ठ › विज्ञान › मङ्गल ग्रहः तीनवटा भूमिगत ताल पत्ता लागेको दाबी
लण्डन, १५ असोज (बीबीसी) । वैज्ञानिकहरूले सन् २०१८ मा सड्ढेत पाइएकामध्ये एकचौथाइ वास्तवमै अस्तित्वमा भएको पुष्टि गरेका छन् । जीवनका लागि तरल पानी महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले यो नयाँ जानकारी सौर्यमण्डलमा जीवनको खोजी गर्नेहरूका लागि रोचक हुनेछ ।
अबाँै वर्ष अघि मङ्गल ग्रहको सतहमा नदीमार्पmत पानी बग्थ्यो र त्यहाँ तालहरू बनेका थिए । त्यसपछि मङ्गल ग्रहले आफ्नो तात्कालिक पर्यावरण गुमाएकोले लामो समयसम्म त्यहाँको सतहमा पानी तरल अवस्थामा रहन सक्दैन । भूमिगत पानीको लागि भने त्यस्तो अवस्था हँुदैन ।
यसले के सड्ढेत गर्छ ?
इटलीको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एस्ट्राफिजिक्स बोलोग्नाका डा. रोबेर्टाे ओरोसीले भने, “पानीका यी प्रणालीहरू विगतमा थिए भन्ने अधिक सम्भावना देखिन्छ । त्यसले वास्तवमै पूरा ग्रहको इतिहासमा त्यहाँ तपाईँका लागि वासस्थान थियो वा वासस्थानकै समान थियो भन्ने देखाउँछ ।”
उनका अनुसार मङ्गल ग्रह जलवलायु विनाशबाट गज्रिँुदै गर्दा अधिक तातो ग्रह बन्दै गएको थियो । तर त्यो कति तातो बनेको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
सन् २०१८ मा अध्येताहरूले रेडारले पठाएका विवरणहरू प्रयोग गरेर मङ्गल ग्रहको दक्षिणी धुव्रका सतहको डेढ किलोमिटरमुनि २० किलोमिटर फराकिलो भूमिगत तालहरू रहेको सड्ढेत गरेका थिए ।
तर त्यो सड्ढेत सन् २०१२ देखि २०१५ सम्म मार्सिसले भेला पारेका गरिएका २९ वटा सूचनामा आधारित थियो ।
इटलीको रोमा ट्रेयूनिभर्सिटीकी वैज्ञानिक एलेन पेट्टिनेली भन्छिन्, “हामीले सन् २०१८ को अध्ययनले देखाएका सम्भावनाहरूको अवस्था, सीमा र बललाई मात्र पुष्टि गरेनौँ थप तीनवटा उज्ज्वल क्षेत्र पनि भेट्यो ।”
“मुख्य ताल पानीको दहबाट घेरिएको छ, तर रेडारको प्राविधिक विशेषता र मङ्गलको सतहबाट यो सम्मको दुरीका कारण हामी तिनीहरू आपसमा जाडिएका छन् किन छैनन् भन्ने तय गर्नसक्दैनौँ ।”
तर, जब धेरै जाडोर धेरै नुन भएको अवस्थामा उनीहरू जीवित रहने सम्भावना सीमित हुन्छ । मङ्गलमा भेटिएका जस्ता तालमा सूक्ष्मजीवहरू बाँच्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने एउटा अध्ययन भइरहेको छ ।
डा. आरोसी भन्छन्, “नुनको धेरै मात्रा जीवनका लागि उपयुक्त हँुदैन । यद्यपि जीवनको सम्भावना देखिन्छ तर त्यसका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ ।”
उक्त शोध अहिले नेचर एस्ट्रनमी जर्नरल प्रकाशित भएको छ ।